Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၈၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ လူ ၁၅,၀၀၀ ခန့် နေအိမ်မှစွန့်ခွာခဲ့ရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေဆီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် အင်အား ၆.၂ ပမာဏရှိသော အင်အားပြင်းငလျင် လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အဦတစ်ခုတွင် ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး (SAR) အဖွဲ့ဝင်များက ရှာဖွေရေးပြုလုပ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- BASARNAS/Handout via Xinhua)) Asia
အဆိုပါ ငလျင်ကြောင့် မာမူဂျူမြို့နှင့် မာဂျင်းခရိုင်ရှိ နေအိမ်များ၊ ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာများ ပျက်စီးခဲ့သဖြင့် လူအများအပြားကို နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်း အမျိုးသား ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီ အကြီးအကဲ Bagus Puruhito က ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေဆီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် အင်အား ၆.၂ ပမာဏရှိသော အင်အားပြင်းငလျင် လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အဦတစ်ခုတွင် ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး (SAR) အဖွဲ့ဝင်များက ရှာဖွေရေးပြုလုပ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- BASARNAS/Handout via Xinhua))
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေဆီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် အင်အား ၆.၂ ပမာဏရှိသော အင်အားပြင်းငလျင် လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ပြိုကျနေသော အဆောက်အဦများမှ လူအများကို ကယ်ထုတ်နေကြစဉ် (ဆင်ဟွာ)
သေဆုံးသူများအနက် ၃၄ ဦးမှာ မာမူဂျူမြို့မှဖြစ်ပြီး ကျန် ၈ ဦးမှာမူ မာဂျင်းခရိုင်မှဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Raditya Jati က ပြောခဲ့သည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူများအနက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူများကို မာမူဂျူမြို့နှင့် မာဂျင်းခရိုင်ရှိ ဆေးရုံများနှင့် ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် တည်ထောင်ခဲ့သော ယာယီဆေးရုံများတွင် ကုသမှုပေးလျက်ရှိကြောင်း Raditya Jati က ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာရသူများအနက် မာမူဂျူမြို့တွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူ ၁၈၉ ဦးနှင့် မာဂျင်းခရိုင်တွင်မူ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိသူ ၆၃၉ ဦးရှိကြောင်း အဆိုပါ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
“အခုတော့ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆေးရုံတွေမှာ ကုသမှုခံယူနေတဲ့ လူနာတွေကို ယာယီဆေးရုံတွေဆီ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများကြောင်း မာမူဂျူမြို့ရှိ Mitra Manakarra ဆေးရုံ ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ လူမှုရေးရုံး တာဝန်ရှိသူ Syarifuddin. S. ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းရသူများကိုလည်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၁၀ ခုတွင် ရွှေ့ပြောင်းထားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် အရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှု အကူအညီများ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောခဲ့သည်။
အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုနှင့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-01-16 09:23:17|Editor: huaxia
At least 42 people have been killed, 800 people wounded aftera6.2-magnitude quake hit Indonesia's West Sulawesi province on Friday.
JAKARTA, Jan. 16 (Xinhua) -- More than 800 people were wounded and about 15,000 others took shelters asa6.2-magnitude quake, which hit Indonesia's West Sulawesi province on Friday, massively destroyed houses and infrastructures,adisaster official said here on Saturday.
As of Friday night, 42 deaths have been reported in the earthquake.
The risk assessment and evacuation of the victims are underway, according to him.■
1-Members of the Search and Rescue (SAR) team search inadamaged building aftera6.2-magnitude earthquake hit Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 15, 2021. (BASARNAS/Handout via Xinhua)
2-Members of the Search and Rescue (SAR) team search inadamaged building aftera6.2-magnitude earthquake hit Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 15, 2021. (BASARNAS/Handout via Xinhua)
3-Search and Rescue team members try to evacuate victims from collapsed buildings aftera6.2-magnitude earthquake in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 15, 2021. (Photo by Sadly Ashari Said/Xinhua)
4-Search and Rescue team members try to evacuate victims from collapsed buildings aftera6.2-magnitude earthquake in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 15, 2021. (Photo by Daus Thobelulu/Xinhua)
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၅၆ ဦးအထိ မြင့်တက်
Next Article တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအကြား ဆက်ဆံရေး ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် ကတိပြု